बिहिबार, जेष्ठ १३, २०७८
‘ट्याक्सी चढेर’ फर्किएका पूर्वमन्त्री बिष्टको सम्पत्ति श्रीमतीकै नाममा, बादल ‘दुई कुकुर’का धनी!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि निवर्तमान श्रममन्त्री बनेका एमालेका प्रभावशाली नेता गोकर्ण बिष्टले २०७६ मंसिर ५ गते मन्त्रालय पुगेर कर्मचारीलाई धन्यवाद दिए। अनि भाडाको ट्याक्सी चढेर निवास फर्किए।
सुन्ने–देख्नेलाई लाग्यो– ओहो! कति साधारण जीवनशैली भएका नेता। पूर्वमन्त्री बिष्टले २०७४ सालमा मन्त्री भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा पनि उनी आर्थिक रुपमा ‘कमजोर’ नै देखिएका छन्।
तर, एमाले नेता एवं पूर्वमन्त्री बिष्टकी श्रीमती चाहिँ धनी! कसरी? प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण हेनुहोस् प्रष्ट भइहाल्छ। पूर्व श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टको काठमाडौं–२६ स्थित सामाखुसीमा निवास छ।
बिष्ट श्रीमतीको नाम श्रीमती प्रमिला श्रेष्ठ हो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारबाट प्राप्त रेकर्डअनुसार नेता बिष्टले सामाखुशीमा रहेको घर आफ्नी श्रीमती प्रमिलाको नाममा रहेको उल्लेख गरेका छन्।
नेता बिष्टकी श्रीमती प्रमिला मेगा बैंकमा २ सय ६५ र कृषि विकास बैंकमा ४९ कित्ता शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
पूर्वमन्त्री बादलको सम्पत्ति पनि श्रीमतीकै नाममा
निवर्तमान गृहमन्त्री एवं एमाले नेता रामबहादुर थापाले अघिल्लो पटक बुझाएको सम्पत्ति विवरण पनि आश्चर्यलाग्दो नै छ। नेता थापाले आफूसँग दुई वटा कुकुर रहेको उल्लेख गरेका छन्।
तर, थापाकी श्रीमती नैनकला थापा चाहिँ लखपति छिन्। चितवनको भरतपुर–१० मा रहेको घर पनि नैनकलाकै नाममा रहेको छ।
भरतपुर–११ मा रहेको जग्गादेखि माथिल्लो तामाकोशीको १ सय ४६ कित्ता शेयरसम्म सबै नैनकलाकै नाममा रहेको थापाले उल्लेख गरेका छन्।
केपी ओलीभन्दा राधिका धनी!
तर, श्रीमतीभन्दा गरीव छन् प्रधानमन्त्री ओली। यसैबीच, ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्रीहरूले गतमहिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन्।
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीकी श्रीमतीको नाम सम्पत्ति छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नाममा जग्गा जमीन छैन। उनको सम्पत्ति विवरण अनुसार तलबभत्ता वापतको ४२ लाख रुपैयाँ एभरेष्ट बैंक लिमिटेडमा रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।
श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरदेखि झापासम्म जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको छ। भक्तपुरको सूर्यविनायक–२ मा डेढ रोपनी जग्गामा २ तीन तले घर पनि राधिकाकै नाममा रहेको छ।
तेह्रथुममा जन्मिएका ओलीको बसाई झापाको पृथ्वीनगरमा थियो। तर, त्यहाँ उनले जग्गा किनेनन्। राधिकाको नाममा १० कठ्ठा जग्गा, १८ तोला सुन, प्रभु बैकमा ६ लाख रुपैयाँ र माछापुच्छ्रे बैंकमा ४ लाख रुपैयाँ रकम पनि राधिकाकै काममा रहेको छ।
राधिकाकै नाम २५ लाख रुपैयाँ बराबरको शेयर रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। सम्पत्ति विवरणमा ओली पत्नी राधिकाले आफै कमाएको अर्थात् स्वआर्जन भनिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशक पदबाट अवकाशप्राप्त प्रथम श्रेणीकी अधिकृत शाक्यले भक्तपुरदेखि झापासम्म कहिले जग्गा किनिन् भन्ने विषय उल्लेख छैन। यद्यपि, प्रधानमन्त्री पत्नीसँग यति सम्पत्ति हुनु कुनै नौलो विषय नभएकाे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालयका एक अधिकृत बताउँछन्।